Filoha Rajaonarimampianina : Mitohy ny asa fampandrosoana
02/06/2018 admintriatra 0
Tsy mitsahatra mijery izay hampandrosoana ny firenena ny Filoha Rajaonarimampianina Hery. Porofon’izany ny fitokanana ireo fotodrafitrasa fototra ataony manerana ny Nosy. Nandritra iny volana iny fotsiny izao, fotodrafitrasa dimy tena manala ny fahasahiranana no notokanan’ny …Tohiny
Mpampianatra mitokona : Alefa any amin’ireo toerana banga rehefa vonona hampianatra
“Tsy misy ny taona fotsy. Tsy mihemotra ny fanadinam-panjakana.” Io no nambaran’ny minisitra Andriniaina Rabary Paul, raha nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly teny amin’ny biraony Anosy. Hentitra ny tenany raha nilaza fa tsy manery izay …Tohiny
67Ha : Trano iray kilan’ny afo
Nitrangana hain-trano indray teny 67 Ha omaly tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro. Iray tamin’ireo “cité” eny an-toerana no niharan-doza tamin’izany. May kila forehitra ary tsy nisy noraisina intsony ny entana tao amin’ireo efitra rehetra …Tohiny
Maintirano : Trano miisa 12 nodoran’ny dahalo
Trano hazo miisa 12 ao amin’ny fokontany Mahasoa, kaominin’Andabotoka, distrikan’i Maintirano no nodoran’ny dahalo miisa 25 nitondra basim-borona 03, rehefa avy norobain’izy ireo ny tolakandron’ny alarobia 30 mey lasa teo. Araka ny fampitam-baovao avy any …Tohiny
Raha toa ka tsy navela niditra teo amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna ireo vahoaka mitaky ny mangarahara sy manohitra ny hala-bato sy ny fanodinkodinana ny safidim-bahoaka tamin’ny fihodianana faharoan’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika farany teo, niala moramora ...Tohiny
Ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana : Mitaky vokatra maika ny filoha